Ndiyo nguva kuzodzosera accessorize: pano ndivo zvikwama unofanira kusarudza kubva - China Guangzhou Zihang Leather
Ndiyo nguva kuzodzosera accessorize: pano ndivo zvikwama unofanira kusarudza kubva
New mwaka, itsva handbag. Ndicho Mashoko angu. Kana hamuna upped renyu chikwama mutambo mwaka ichi, zvino ndiyo nguva.
Accessories vari nyore nzira baya jekiseni mumwaka flair zvose zvenyu outfits uye bhegi akanaka anoenda kure.
Nokuti vamwe, bhegi anongova bhegi. You kuushandisa kuita kwako zvinodiwa uye kuti nezvazvo. Unogona kuva inokosha kwazvo, pamwe kunyange pachena dema, chikwama Zvawava akatakurwa kwemakore mashanu-uye ndinoiitawo. It haana abvarura uye achiri anoita basa rayo, saka imi havaoni kukosha kutenga itsva.
Asi nokuda fashionistas zvenyika, chikwama imwe mukana wokuratidza nyika yako pachako manyorerwo uye siluetti kuti unomirira iwe. Izvo zvinoreva: nyore, uye zvimwe kusakadzwa, bhegi chete haazoiti.
Tichinyanyotarisa muzvikwama, chishongedzo ichi unogona kukurumidza kuudza onlooker yezvauri zvose pamusoro. Unofarira kutengeserana anowana kubva Target? Uri kuzopindazve muumbozha zvinhu uye bhizimisi iri unhu zvidimbu? Kana iwe vanorichengeta vaitambira aine chikwama chemari yesimbi iwe kuti zvinhu foni wako?
High-Nokuraramisa kana kuenda-pamwe-chete-chekubuda kinda musikana? Like kana kwete, chikwama chako rinoti zvizhinji.
The kunakidzwa mapfekero kwava kuedza akasiyana yokurera Jazz kumusoro vanhuwo #OOTDS. A Muitiro ingori kuitika kusvikira iwe kuti yako.
Kufanana ne anotevera mana handbag yokurera, vamwe vakwegura favorite modernized kuti nhasi apo vamwe vari muchiso itsva fashoni nyika uye ndave kuwedzera nguva wandei.
All chakanaka kodzero dzavo uye caterers kuti kupararira nomumwe munhu zvekunyanyisa.
The ona-kuburikidza bhegi
Clothing akaita kubva PVC kwave kuitika yakakura kwechinguva ikozvino, asi handina mhosva here kana iwe hauna kusvetuka musoro kutanga kupinda ichi läpinäkyvä kuitika - I zvechokwadi haana. Pane chimwe chinhu pamusoro kupfeka epurasitiki bhurukwa kana zvitsitsinho muchirimo usingateereri seyakanaka kwandiri.
Asi pamusoro handbag? Ndiri kuda tambozviedza.
Mashoko Varege kwazvo pamwe bhegi pacharo, asi chero zvawasarudza kutakura mukati. Sezvo zvose zvaunazvo vachava zvizere kuratidzwa, iwe unenge uchida curate zvinhu saizvozvo.
Sarudzai swankiest lipstick yako kana zvimwe masikirwo bhegi rine kunonakidza mazwi. Mikana kwete chete zvisingaperi, vanenge dzemhando yepamusoro.
bhegi iri rinoenderera nemazita mazhinji: uswa, yakarukwa, bhakiti, asi ivo vose akanyatsorevesa anorondedzera imwe chikwama. Ndinoda dengu hombodo chirimo (uye mberi) nokuti kunzwa zviri rinovayeuchidza rakasiyana nemamwe - zviri zvakafanana anobudisa hot-mamiriro okunze Vibes kunyange chilliest zuva.
Kana uri kutya splurge kana kunyange chete kutenga uswa bhegi nokutya kuti kubuda zvidavado, fungazve. zvikwama izvi inonhuhwira upi nyore zhizha hembe asi ivowo vave zvinokosha paaigadzirira kunonakidza uchapukunyuka. Imbofunga pamusoro zvose nguva kwawakamboita dai iwe waiva dzinopisa-esque chikwama rokubata ako zvinodiwa kumativi pamhenderekedzo? Ndiyo bhegi.
The denderedzwa bhegi
Circle zvikwama vakaenzana nhengo mazambiringa uye ano. Varege kuva zvikuru zvinoshanda asi hazvina basa; uchaita kutarisa zvakanaka mambakwedza rimwe pamusoro wako suntanned papfudzi kana Kuzungunuka arambe zvishoma.
Available neurefu hwakasiyana zhinji uye zvitaera, ichi muitiro unogona kuonekwa sechinhu ode mamwe isingachinji mufashoni eras. Hat-bhegi akafuridzirwa denderedzwa mumasaga akanga kazhinji kuonekwa akatakurirwa sirivha chidzitiro sirens of 1950s. Zvino, ichi zimbabwe manyorerwo zviri shure uye iri zvikuru demure uye chaiwo nzira yokuva pasi muitiro ipapo dzimwe akasungirwa pasi rino.
Kana uchida kuva ano kutora pamusoro werudzii ichi, vasarudze siluetti uine crossbody anosungira kuti nyore kwevhiki kusakara. The anosungira kuunza akaisa-musana vibe kune yakabwinyiswa bhegi iri uye kuwedzera nyore.
Vachiri kuda zvimwe spunk? Vamwe denderedzwa mumasaga kuuya muchekechera nenhumbi kana mitsetse mapatani kuwedzera kupfuura kuitika, uye akadzikama kunzwa kuti mbatya dzako. The siluetti ichiri chaiwo asi reserved mukwanisi iyezvino nguva.
The itty-anofamba bhegi
Kwete nokuti zvinoshanda, bhegi izvi tsanangudzo zvose chete chishongedzo nokuti havazokwanisi kutakura zvakawanda asi iwe unenge chokwadi kutarisa trendy.
Bags kuti tsvaka ikodzere-gore 4-kare zvako muzukuru zviri pose pose izvozvi uye vanhu vari kudana navo chic. The nokusingaperi-saka-akakurumbira bhandi bhegi (ngatitaurei chete kumutumidza chii: a Fanny rongedza) akatopa downsized kuti kutevedzera muitiro uyu uyewo.
Ichi chitsva minimalism Kutarira akatopa atora pamusoro vamwe nenhumbi akaita Sunglasses uye pazvitsitsinho. Vakadzi vari vanotengesa zvavo iconic oversized Sunglasses nokuda sleeker katsi-ziso chimiro uye forgoing kwavo stiletto zvitsitsinho mumwe-to-mbiri padiki pombi.
Kutevedzera izvi zvishoma-ndiyo-zvikuru akakodzera anosika fungidziro kuti haufaniri kuona kana kunzwa zvakanaka. The micro bhegi chaizvoizvo zvose zvaunoda.
Saka ongorora nhumbi dzenyu, zvikuru chaizvoizvo, pamukova nekuti oversized ari uye duku riri.